ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ”ရက်စက်မှုအဟောင်း- ဖော်ထုတ်မှု အသစ်များနှင့် မြန်မာ”
”ရက်စက်မှုအဟောင်း- ဖော်ထုတ်မှု အသစ်များနှင့် မြန်မာ”
(ဘာတီးလ်လစ်တနာ by Asia Times ရေးသား/ ကျော်မျိုး 7day News Journ ဘာသာပြန်ဆို)
by အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား on Sunday, November 11, 2012 at 5:42pm ·
-Ref : Myanmar : Old Atrocity, new implications by Bertil Lintner. Asia Times.
(ဘာတီးလ်လစ်တနာ ရေးသား၍ ကျော်မျိုး ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်နှစ်ဆယ်ခန့်က လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ခုက ကျူးလွန်ခဲ့သော သွေးထွက်သံယို ရက်စက်မှုတစ်ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံအား ဆက်လက်ခြောက်လှန့်နေသည်။ ထိုအမှုမှာ နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှု အစိတ်အပိုင်းများ၊ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ထောက်ခံအားပေးသူများနှင့် ယခင်စစ်အစိုးရ၏ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများ
ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရသစ်တို့အတွက် ကျယ်ပြန့်သောအကျိုးဆက်များ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
မြန်မာအာဏာပိုင်များသည် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကောင်းစွာသိနားလည်ထားကာ သတိရှိရှိနှင့်ပင် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါသည်။ မြန်မာလူမျိုး သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ပြောသလိုပင်။ “တကယ်မမေ့နိုင်ကြသေးပေမယ့်၊ သူတို့ရဲ့ ရဲဘော်တွေကို သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ခွင့်လွှတ်ကြမယ်ဆိုရင် ၁၉၈၈ ခု စစ်တပ်ရဲ့ကျည်ဆန်တွေကြောင့် အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ လူထောင်ပေါင်းများစွာအတွက် တရားမျှတမှုကရောဘာလဲ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း မှောင်မည်းတဲ့ အကျဉ်းထောင်အခန်းတွေထဲမှာ သူတို့ငယ်ဘ၀ရဲ့ အချိန်အများစုကို ကုန်ဆုံးစေခဲ့ရ၊ အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသူတွေအတွက် တရားမျှတမှုကရော ဘာဖြစ်မလဲ”ဟူ၍။
မန္တလေးမြို့မှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ လူသိများသည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်ပြီး ABSDF မြောက်ပိုင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည့် (ကို)ထွန်းအောင်ကျော်မှာ (ကျန်ရစ်သူများ၏) ပြောပြချက်အရ သံပူပြားဖြင့် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီးနောက် ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် မသေခင်အစောပိုင်းက ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံထားရသည့် အခြားရဲဘော်တစ်ဦး၏ ခေါင်းမှထွက်ကျနေသော သွေးများကို သောက်သုံးရန် အတင်းအကျပ် စေခိုင်းခံခဲ့ရသည်။ စွပ်စွဲခံရသည့် အခြားတစ်ဦးဖြစ်သည့် (ကို)အောင်ဖုန်းမှာ ခြေထောက်တွင် မြေမြှုပ်မိုင်းများချည်နှောင်၍ ဖောက်ခွဲခံရပြီး ခြေထောက်ပြတ်ခဲ့ရသည်။ ထိုနေ့မှာပင် ၎င်းမှာလည်း ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။
သူလျှိုများကို စွပ်စွဲရှာဖွေမှုကိစ္စမှာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း၌ ABSDF စခန်းမှ နယ်စပ်အနီး တရုတ်ပြည် ယင်ကျန်း၌ တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပစ္စတိုသေနတ်များ၊ လောင်ချာများနှင့်အတူ မြန်မာလူငယ် ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးမိလိုက်ရာမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကို စခန်းသို့ ပြန်ပို့ခံခဲ့ရပြီးနောက် လူငယ်တော်လှန်ရေးသမားများအကြားတွင် ရူးသွပ်မှုက ရုတ်တရက် ထူးခြားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တော့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ABSDF က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဗီဒီယိုတိတ်ခွေတစ်ခု၌ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသော လူငယ်များမှာ သစ်သားစားပွဲတစ်ခု၌ ထိုင်နေကြပြီး ၎င်းတို့အသွင်မှာ ထိုစဉ်က ၎င်းတို့ကို ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများပုံစံအဖြစ် မြင်ကြည့်ရသည်ထက်.. ရောမခေတ်က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိများအသွင်နှင့် ပိုတူနေတော့သည်။
ဗီဒီယိုတိတ်ခွေထဲ၌ စွပ်စွဲခံရသူတစ်ယောက်ချင်းသည် ၎င်းတို့၏ “ပြစ်မှု”များကို ၀န်ခံခဲ့ကြသည်။
ကျန်ရစ်သူ နောက်တစ်ဦးဖြစ်သည့် (မ)နန်းအောင်ထွေးကြည်ကလည်း သူမ၏ဦးခေါင်းကို သေနတ်ဖြင့် ချိန်ထားခံရပြီး သူမ နားမလည်သော မေးခွန်းဖြစ်သည့် “သူတို့ မင်းကို ဘာလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားလဲ”ဟူသော မေးခွန်းကို အမေးခံခဲ့ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထိုစဉ်က အသက် ၂၀ အရွယ်အတွင်း ကျောင်းသားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် နန်းအောင်ထွေးကြည်မှာ အစိုးရ၏ စစ်ထောက်လှမ်းရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေသည့် ဒုတပ်ကြပ်တစ်ဦးအဖြစ် စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ သူမမှာ ယခုအခါ ပြည်ပအခြေစိုက်အနေဖြင့် ဆစ်ဒနီတွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက် ဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးနေဆဲရှိနေသည်။
စွပ်စွဲခံရသူများ၏ မိသားစုအချို့မှာ ABSDF မြောက်ပိုင်းစခန်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ နန်းအောင်ထွေးကြည် အပါအ၀င် ယနေ့အထိ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအချို့မှာ ပြန်လွှတ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပြီး- ကိုထိန်လင်းနှင့် အခြားသူများမှာမူ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ရပြီးနောက် အစိုးရတပ်များ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရကာ အကျဉ်းထောင်သို့ နှစ်ပေါင်းများစွာကျခံရန် ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသည်။
ထိုအချိန်လောက်က (ကျောင်းသားများအား) သတ်ဖြတ်မှုကို ပြင်ပကမ္ဘာ၏ အာရုံစိုက်မှု အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။
မြောက်ပိုင်းရှိ ထိုကျောင်းသားစခန်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ဖူးသော နေးရှင်းသတင်းစာမှ ထိုင်းသတင်းထောက် ယင်းဒီလတ်ခူးရိုယန်ချုတ်ကမူ ထိုအကြောင်းကို သူမ၏ ဘန်ကောက်အခြေစိုက်သတင်းစာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
ဤစာရေးသူသည်လည်း လူသတ်မှုများအကြောင်းကို ၁၉၉၂၊ ဇွန် ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် Far Eastern Economic Review အရှေ့ဖျားစီးပွားရေးစာစောင်တွင် ရေးသားခဲ့ဖူးသည်။
အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးကျောင်းသားအုပ်စုကို တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခဲ့သော နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြသည်။
ထိုင်းနယ်စပ်တွင်ရှိသော ABSDF ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးသည် ၁၉၉၂ မတ် ၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဤအချက်မှာ ဖမ်းမိခဲ့သောသူများသည် ABSDF ခေါင်းဆောင်များကို လုပ်ကြံရန် ကြိုးပမ်းသော အစိုးရသူလျှိုများဖြစ်၍ သုတ်သင်ခံရခြင်းများအပေါ် သက်သေပြသလို ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ABSDF တစ်ဖွဲ့လုံး၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ နိုင်အောင်မှာ ဖမ်းဆီးမှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက် မြောက်ပိုင်းသို့ရောက်ခဲ့ကာ သုတ်သင်မှုများကို ရှုတ်ချခြင်းမပြုခဲ့ဟု သတင်းများအရဆိုသည်။ ၎င်းကလည်း ဖမ်းဆီးခံထားရသူများကို ထိုစဉ်က ၎င်းကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာ၌ သူလျှိုများအဖြစ် ညွှန်းဆိုထားခဲ့သည်။
သတ်ဖြတ်မှုများဖြစ်စဉ်က ABSDF မြောက်ပိုင်းဗျူရို၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ရော်နယ်အောင်နိုင်က ဖြစ်ရပ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို ထိုင်းအခြေစိုက် စာရေးဆရာဖီးလ်သွန်တန်၏ Restless Souls:Rebels, Refugees, Medics andMisfits on the Thai-Burma Border စာအုပ်၏ အခန်းတစ်ခန်းတွင် ၀န်ခံထားခဲ့သည်။
ယနေ့ကာလတွင်တော့ နိုင်အောင်သည် ထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက် Forum For Democracy in Burma ကို ခေါင်းဆောင်နေပြီး၊ ရော်နယ်အောင်နိုင်မှာ ထိုင်းမြောက်ပိုင်း မြို့တော်ချင်းမိုင်၌ မီဒီယာလေ့ကျင့်ရေးမှူးတစ်ဦး ဖြစ်နေပါပြီ။
သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုများနှင့် ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ အများစုမှာ ယခုအခါ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုများ ရယူနေဆဲဖြစ်ပြီး ဤအခြေအနေကို ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနှင့် ပြည်ပတွင်နေထိုင်သော ကျန်ရစ်သူများက စိန်ခေါ်၊ ဖော်ထုတ်လျက် ရှိနေခဲ့ပါပြီ။
Asia Times Online သတင်းဌာန၏ မေးခွန်းများကို စာဖြင့်ရေးသား ဖြေဆိုထားချက်၌၊ နိုင်အောင်က ၎င်းသည် ABSDF ဗဟို၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် သိရှိမှုမပါဘဲ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ၎င်းဆိုသော ထိုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို နောင်တရမိကြောင်း ပြောထားပါသည်။
၎င်းသည် နေးရှင်းသတင်းစာတွင် ပါမလာခင်အထိ သတ်ဖြတ်မှုများကို သတိမပြုမိခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်း၏ဌာနချုပ်သည် “အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းအပေါ် ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လက်တွေ့ပိုင်းအရရော၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရပါ မည်သည့်အာဏာမှ မရှိခဲ့ကြောင်း”ဆိုပါသည်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရှိ ကနေဒီ School of Government ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခွင့် စကောလားရှစ်ရခဲ့သော နိုင်အောင်သည် သုတ်သင်မှုမှ ကျန်ရစ်ခဲ့သူများ၏ ကန့်ကွက်ခြင်းခံရပြီးနောက် ၂၀၀၂ တွင် ၎င်း၏ပညာသင်ဆု ရုတ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
၂၀၀၈တွင် ရော်နယ်အောင်နိုင်မှာ BBC သတင်းဌာန၏ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွင် သတင်းထောက်အဖြစ် ငှားရမ်းခံရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကန့်ကွက်မှုများကြောင့် ရာထူးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ယခုလအတွင်း ရန်ကုန်တွင် ဤစာရေးသူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သော ကျဆုံးသူများ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် ကျန်ရစ်သူများသည် ၎င်းတို့၏အမှုနှင့် ဇာတ်လမ်းများကို ပြောပြရန် စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်။
နောက်ကြောင်းပြန်လှန်၍ ဖော်ထုတ်ရေးသားသော ဆောင်းပါးများစွာလည်း ထိုအစုအပြုံလိုက် သုတ်သင်မှုအကြောင်းကို မြန်မာ့မီဒီယာများတွင် မကြာသေးမီက ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။
သုတ်သင်မှုမှာ ကျန်ရစ်သူတစ်ဦး၏ အစ်ကိုတော်စပ်သူ မောင်မောင် ခေါ် ရွှေကရ၀ိတ်မှာ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ “ခေတ်သစ်ဟင်္သာကိုးသောင်းဇာတ်လမ်း”အမည်ဖြင့် မြန်မာဘာသာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသားထုတ်ဝေထားခဲ့ပါပြီ။
ယခုအချိန်မတိုင်မီအထိမူ ကျန်ရစ်သူများထဲမှ တစ်ဦး၏ပြောကြားချက်အရ ၎င်းတို့နှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များသည် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအား ဆန့်ကျင်သည့် စစ်တပ်၏ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးအဖြစ် အသုံးချခံရမည့်အရေး ရှောင်ရှားနိုင်ရန် -၎င်းတို့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်များကို မဖော်ပြချင်ကြဟု ဆိုကြပါသည်။
နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ Amnesty International ၊ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ Human Rights Watch နှင့် အခြား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာစစ်တပ်၏ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုများအပေါ် လက်နက်အင်အားအသုံးပြု၍ နှိမ်နင်းခြင်း၊ တရားစီရင်ခြင်းမရှိဘဲ သတ်ဖြတ်မှုများ၊ လက်လွတ်စပယ်ဖမ်းဆီးမှုများ၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုများနှင့် မုဒိန်းမှုများကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်ထား ကြပါသည်။
Human Rights Watch အဖွဲ့မှ မြန်မာ့ရေးရာ အကြီးတန်းသုတေသီ ဒေးဗစ်မက်သီးဆင်က “ABSDF ကိစ္စဟာ အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကနေ သူပုန်အုပ်စုတွေအထိ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျူးလွန်ကြသူတွေကို နမူနာတစ်ခုအဖြစ် ပြသသင့်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှုက အတိတ်က မတရားမှုတွေကို ဖြေရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ထိုကျယ်ပြန့်တဲ့ လူထုကြား အငြင်းအခုံကို လှုံ့ဆော်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို(တရားစီရင်ရေး) ယန္တရားက ဆယ်စုနှစ်များစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ မတရားမှုတွေ၊ အပြစ်ဒဏ်က လွတ်ခဲ့မှုတွေကို အဆုံးသတ်ရေးမှာ အကောင်းဆုံးသင့်တော်တာ ဖြစ်မလဲဆိုတာကို လှုံ့ဆော်စေနိုင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ပထမဆုံးသော မဖြစ်နိုင်သည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ကိုမူ ABSDF သတ်ဖြတ်မှုများမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သူများက ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ သို့သော် မြန်မာ (သို့မဟုတ်) အခြားနေရာတစ်ခုခုရှိ တရားရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်က ၎င်းတို့အမှုကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်လိုစိတ် ရှိသလားဆိုသည်မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရဦးမည်။
“အတိတ်က ချိုးဖောက်ခဲ့မှုတွေကို မသိကျိုးကျွံပြုခြင်းဟာ မတရားပြုခဲ့သူတွေကို စွပ်စွဲခံရမှုကင်းအောင်လုပ်တာ၊ အပြစ်မဲ့ခံစားခဲ့ရသူတွေနဲ့ သူတို့မိသားစုတွေအတွက် အမှန်တရားကို ငြင်းပယ်တာ၊ ပြီးတော့ အရပ်သားတွေအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ခံစရာမလိုဘဲ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တစ်ရပ်ကို အလားအလာရှိရှိ အားပေးအားမြှောက်ပြုတာပါပဲ။ မြန်မာ့လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေဟာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ တရားရေးအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရတာ ရှားလှတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်း အဲဒီလိုမရှိကြပါဘူး”ဟု သုတေသီ မက်သီးဆင်က ပြောလိုက်ပါသည်။
(မူရင်းဆောင်းပါးရှင် ဘာတီးလ်လစ်တနာသည် ယခင်က Far Eastern Economic Review ၏ သတင်းထောက်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာ့အရေးစာအုပ်များစွာ ရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းတွင် Aung Sann Suu Kyi and Burma's Struggle for Democracy (2011) နှင့် Burma in Revolt : Opium and Insurgency Since 1948 (၂၀၀၃)၊ Outrage Burma's Struggle for Democracy (၁၉၉၀)၊ The Rise and Fall of the Communist Party of Burma (၁၉၉၀)တို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် လက်ရှိတွင် Asia Media Services ၏ ဆောင်းပါးရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။)
(ဆဲဗင်းဒေးစ် နယူးစ် ဂျာနယ် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ ကူးယူသည်။)
37Unlike · ·
You, Nang Aung Htwe Kyi, Kyaw Gyi AB, Ye Myint and 27 others like this.
အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား “အတိတ်က ချိုးဖောက်ခဲ့မှုတွေကို မသိကျိုးကျွံပြုခြင်းဟာ မတရားပြုခဲ့သူတွေကို စွပ်စွဲခံရမှုကင်းအောင်လုပ်တာ၊ အပြစ်မဲ့ခံစားခဲ့ရသူတွေနဲ့ သူတို့မိသားစုတွေအတွက် အမှန်တရားကို ငြင်းပယ်တာ၊ ပြီးတော့ အရပ်သားတွေအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ခံစရာမလိုဘဲ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တစ်ရပ်ကို အလားအလာရှိရှိ အားပေးအားမြှောက်ပြုတာပါပဲ။ မြန်မာ့လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေဟာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ တရားရေးအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရတာ ရှားလှတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်း အဲဒီလိုမရှိကြပါဘူး”ဟု သုတေသီ မက်သီးဆင်က ပြောလိုက်ပါသည်။
November 11, 2012 at 6:43pm · Like · 5
Ye Myint Bertil Lintner ရေ ခင်ဗျားကိုတော့တသက်ကျေးဇူး မမေ့ ပါဘူး။ 1988 ကအစ ယခုအထိပါဘဲ။ ခင်ဗျားဖတ်ချင်ရင် ကျနော့Personal Page ကို ၂၄ နာရီဖွင့် ပေးထားမယ်။ www.yemyint88.net
November 11, 2012 at 7:01pm · Edited · Like · 2
Ye Myint ၂၄ နာရီကျော်လျှင် သွားပြီး မကြည့်မိပါစေနဲ့ ။ that page would be opened for 24 hours only for you. Afterwards, DO NOT CLICK THAT PAGE.!!!!!!!!!!
November 11, 2012 at 7:03pm · Unlike · 3
Dracular Wadi “အတိတ်က ချိုးဖောက်ခဲ့မှုတွေကို မသိကျိုးကျွံပြုခြင်းဟာ မတရားပြုခဲ့သူတွေကို စွပ်စွဲခံရမှုကင်းအောင်လုပ်တာ၊ အပြစ်မဲ့ခံစားခဲ့ရသူတွေနဲ့ သူတို့မိသားစုတွေအတွက် အမှန်တရားကို ငြင်းပယ်တာ၊ ပြီးတော့ အရပ်သားတွေအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ခံစရာမလိုဘဲ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တစ်ရပ်ကို အလားအလာရှိရှိ အားပေးအားမြှောက်ပြုတာပါပဲ။ မြန်မာ့လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေဟာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ တရားရေးအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရတာ ရှားလှတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်း အဲဒီလိုမရှိကြပါဘူး”ဟု သုတေသီ မက်သီးဆင်က ပြောလိုက်ပါသည်။
November 11, 2012 at 7:35pm · Like · 5
Nyunt Shwe Ye Myint - I don't know if Mr. Bertil Lintner was interested to read your home page, but I have just read your impressive resume, thesis, and dissertation proposal, not all in all but, justabit here andabit there. And I found there wasasmall mistake you should correct in your resume where you mentioned you other jobs. There instead of United Nations . . . . . . . . (UNHCR), you wrote United States . . . . . . . . . (UNHCR).
November 11, 2012 at 8:26pm · Like · 2
Ye Myint That one that I posted couid be the first draft without proof-reading. The versions that I uploaded to employers had to be fine-tuned according to the nature of the job that I was applying for and proof-reading was done each time before an upload. The one that You pointed out isageneric one.
November 11, 2012 at 9:46pm · Like · 1
Ye Myint And, when 24 hours is up, all the *.pdf files would be replaced with different versions of *.pdf files which look exactly the same as what you just saw. But, there could be invisible 'computer codes' embedded in those files. So, without proper security settings, some windows or apple computers which clicked on those links could be damaged.
November 13, 2012 at 7:24pm · Edited · Like · 1
Ye Myint Bertil and I used to do things back in 1989-1991 back in Thailand. Ma Sarn Noung always cooked for us every time we visited their home in BKK at the time. E-Ying (Bertil's daughter) was onlyacouple of years old back then. I was trying to update Bertil about myself. Are you Bertil's close friend, Nyunt Shwe?
November 11, 2012 at 9:51pm · Like · 2
Udp Myanmar မတရားမှု အထူးသဖြင့် လူသတ်မှု ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှု မတရား အဓမ္မပြုကျင့်မှု စတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ထားရင်တော့ ဘယ်သူပဲ ကျူးလွန် ကျူးလွန် ဘယ်အဖွဲ.ပဲ ကျူးလွန် ကျူးလွန်ပါစေ တနေ.တော့ ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါသည် အကြွေးချေသလိုမျိုး ချေလို.မရပါ။ မတရား လုပ်သူတွေကတော့ တရားမျှတမှုအတွက် ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ကျူးလွန်ခဲ့သည့် နာဇီတွေရဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ အခုအထိ ပေးဆပ်နေရဆဲ မဟုတ်လား ဘယ်နေရာ ဘယ်တိုင်းပြည်ရောက်ရောက် ရင်ဆိုင်နေရတာပဲ။
November 12, 2012 at 2:14am · Like · 5
Nyunt Shwe ကိုရဲမြင့်၊ ခင်ဗျား ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တာတော့ဟုတ်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ မသိတဲ့လူက ဖွင့်မိရင် ပျက်စီးနိုင်တယ်၊ ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဖိုင်မျိုးကို ခင်ဗျား ဘာအတွက် တင်သလဲ။
မနေ့က ခင်ဗျားပေးတဲ့ လင့်ခ်တွေကို ကျုပ်ဖတ်ကြည့်တယ်။ အမှားတစ်ခုတွေ့လို့ စေတနာထားပြီး သတိပေးခဲ့တယ်။ ပထမစာကြမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဒုတိယစာကြမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချောပဲဖြစ်ဖြစ် မှားတတ်ကြတယ်၊ မှားရင် လူဆိုတာဝန်ခံတတ်ရတယ်၊ ထောက်ပြသူကို ကျေးဇူးတင်တတ်ရတယ်။ ကျုပ်က ခင်ဗျားပြင်ထားတဲ့ဟာကို ဖတ်ခွင့်ရတာ မဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျားပေးဖတ်တာကို ဖတ်တာ။
ခင်ဗျား လေ့လာတတ်ကျွမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ပညာတွေက အထင်ကြီးစရာပဲလို့ ကျုပ်ရေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျား ရီဇူးမေး မရေးတတ်ဘူး။ အင်တာနက်မှာ နည်းနည်းလျှောက်ကြည့်ပါ၊ ဒီအတွက် သပ်သပ်ထုတ်ထားတဲ့ ရီဇူးမေးရေးနည်းစာအုပ်ကောင်းတွေလဲ ရှိပါတယ်။ “ပညာရေးနဲ့အလုပ်အတွေ့အကြုံ အကျဉ်း“ လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးရင်တော့ ထူးမပြောလိုပါဘူး။
ကျုပ် ခင်ဗျားမိတ်ဆွေရဲ့ မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူ့စာတွေ ဖတ်ဖူးတယ်၊ လေးစားတယ်။
November 12, 2012 at 7:25pm · Like · 1
Ye Myint စောက်ရူး ညွန့် ရွှေ ။ မင်းပါးစပ် ပိတ်ထားစမ်း။ မင့် နှမလင်တွေ ငါ့ ကို အကုန်လိုက်ကြည့် နေလို့ငါ့ personal page မှာ မိုင်းတွေ ထောင် ထားတာ။ မင်းကို ငါ လာကြည့် ပါလို့ ဖိတ်စာလဲ ပုို့ မထားဘူး။ မင်းဟာမင်း ဖင်ယားပြီး လျှေက်ကြည့် နေတာ။
November 14, 2012 at 4:07am · Edited · Like
Ye Myint ခွေးသား မင်းငါ့ကို Internet မှာ ဘာတွေရှိတယ်။ညာတွေရှိတယ်နဲ့ဘုန်းကြီးစာချ လုပ်မနေနဲ့ ။ မင်းဘယ်နှစ်ခုနှစ်က စပြီး အင်တာနက် သုံးဘူးတာလဲ။ Cello ဆိုတဲ့web browser ဆိုတာကြားဖူး လား။
November 13, 2012 at 6:57pm · Like · 1
Smile Pyone ကဲပါရဲမြင့်ရာ ကိုယ်တတ်တိုင်းလျှောက်အာဝါဒါးပေးမနေနဲ့
November 13, 2012 at 7:05pm · Like · 5
Sai Naing Soe Win I do not see any reason to be rude to each other..... Why all the swear words ? Are you NOT the same country-folks ? A little bit of Education get into your Heads. Shame !
November 14, 2012 at 6:16am · Like · 1
Ye Myint မောင်ပြုံး ဒီခွေးသား စောက်ပါးစပ်ပိတ်မထားရင်တော့တနေ့ နေ့ တွေ့ မယ်။
November 14, 2012 at 6:48am · Like
Ye Myint ဘေးကလူများကိုတော့ နဲနဲ ဘဲ အားနာတယ်။ ငါတို့ က ကိုယ့် ဖာသာကိုယ်နေတယ်။ ၀င်ပြီး ဖင်ယားတဲ့ အဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေဆို အဲ့ ဒီလို ဘဲ တုန့် ပြန်တယ်။ ဒီခွေးသား ဒို့ ဘန်ကောက်မှာ သောင်တင် ခဲ့ စဉ်က မျိုးဆိုရင် တောင်ကျော်ညီညီထက် အဖြစ်ဆိုးသွားနိုင်တယ် မောင်ပြုံး။
November 14, 2012 at 6:53am · Like · 1
Nicky Shein အင်း.... မောင်ကျောင်း (အင်းဝ) ဆိုတဲ့ ဘိုးတော်ညွန့်၊ ဒီတခါတော့ ခပ် စပ်စပ်လေး ထိသွားပြီပေါ့၊ ကျုပ်လဲ ခင်ဗျားကို ကြည့်နေတာ ကြာပါပြီ၊ ကြီးတောင့် ကြီးမား နေရာတကာ ပြာရာပြာရာ ဝင်လုပ်ပြီး ဆရာကြီးလိုလို ဝင်ဝင်လုပ်တော့ ခုတွေ့ပြီပေါ့၊ ခင်ဗျား အသက်အရွယ် ကြီးနဲ့ ခုလို အပြောခံရတာတွေးပြီး မရှက်ဘူးလား၊ ကိုယ့်ဘာကိုယ် အေးရာအေးကြောင်းနေပါဗျာ၊ ဟိုဖက်က 88 people power mail group မှာလဲ၊ ခင်ဗျားပဲ၊ ဘန်ကောက်က အောင်စည်နဲ့လဲ ပါလိုက်တာပဲ၊ ကုလားကိစ္စဆိုလဲ ခင်ဗျားရှေ့ဆုံးက၊ ဘုံးကြီးတွေနဲ့လဲ ခင်ဗျားပဲ ပူညံပူညံ လုပ်ပြန်တာပဲ၊ ငြိမ်းချမ်း ဆိုသူက မေးနေတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ပြုစုထားတယ်လို့ ခင်ဗျားပြောလို့ စာတမ်းကြီး ထုတ်ပြပါဆိုတော့လဲ ခုထိ ထုတ်မပြနိုင်ပြန်၊ ဒီခေတ်ကြီးမှာ တကယ်တတ်တဲ့ သူတွေပြောရင် ကျုပ်လိုနေ၊ ကျုပ်လိုနေ ဆိုတာ ကိုယ်က သူတို့လို မတတ်ရင် မတတ်သလို ဘေးမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီး၊ ဘာမှဝင်မပြောတာ၊ ခုတော့ ခင်ဗျားက တတ်လဲမတတ်ဘူး၊ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဆရာကြီးလိုလို ဝင်ဝင် ဖြီးတာ၊ လူတွေက အားနာလို့ မပြောဘဲသာနေတာ၊ ခင်ဗျားကို စောက်ပေါကြီးဆိုပြီး အားလုံးက သတ်မှတ်ထားတာ ခင်ဗျားသိလား၊၊ လူဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ မကျွမ်းကျင်တာ ရှက်စရာမဟုတ်ဘူး၊ ရှက်စရာက မတတ်ပဲ တတ်ရောင်ကားလုပ်တာမှ ရှက်စရာ၊ ကျုပ်လို မသိရင်မသိသလိုနေတာလေ... လူအထင်ကြီးမခံရပေမဲ့ ခင်ဗျားလို အရှက်ကွဲ သလိုတော့ အထင်သေးမခံရဘူးပေါ့ဗျာ၊ ကဲ မကောင်းဘူးလား၊ ကျုပ်လို အေးရာအေးကြောင်း နားမလည်ရင် နားမလည်သလိုပဲ နေလိုက်တော့ မရှက်ရတော့ဘူးပေါ့၊၊ လောကကြီးမှာ ကိုယ်မသိတာကို ကိုယ့်ထက် သိတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေတာ ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဗျ၊ အသက်တွေလဲ ကြီးနေပါပြီဗျာ၊ တခြားနေရာတွေမှာ ခင်ဗျားက ဘုန်းကြီးတွေတောင် စာပြန်ချနေတာ ခင်ဗျား ကျုပ်ထက် ပို နားလည်မှာပါ၊ ကဲကဲ နောက်တခါ အဆံမခံရအောင်နေ နော် .. ကြားလား။
November 16, 2012 at 9:06pm · Edited · Like · 2
Hmone Shwe Yiကျွန်တော်.အမြင်ကတော.ဘာဘဲဝင်ပြောပြောကောင်းကောင်းမွန်ထောက်ပြရင်ဘယ်လိုလူဘဲစြေ်ဖြစ်ပြေရာပြေကြောင်းပြောသင်.တယ်ထင်တယ်--အမြင်မတူရန်သူတော.မဖြစ်သင်.ဘူး-
November 22, 2012 at 5:40am · Like · 1
Nyunt Shwe Ye Myint ရေ၊ ငါရေးခဲ့တာတွေ ပြန်ဖတ်ပါကွာ၊ ငါ စေတနာအရင်းခံပြီး ပြောခဲ့တာပါ။ ခုမှ မင်းရေးထားတာတွေကို တွေ့လို့ စာပြန်လိုက်တယ်ကွာ။ ငါက မင့်အဖေ့ထက် အသက်ကြီးလောက်ပါတယ်။ မင့်ပါးစပ်က ဟိုအနံ့တွေ ထွက်နေပါလားကွာ၊ အင်း မင်းအမေခမြာ ကံဆိုးရှာတယ်၊ မဆီမဆိုင် သူ့ခမြာ မင်းနှုတ်က ရုံ့ရင်းတဲ့အတွက် အမိယုတ်က နှုတ်ကြမ်းလို့ ကျန်သူတွေက ထင်ကြဦးမယ်။
နောက်တစ်ခုက ဖဘမှာ ဘယ်သူမဖတ်ရဘူး၊ ဘယ်သူ မရေးရဘူးလို့ မရှိဘူး။ စိုင်ကော်မှ ခြုံပေါ်ရောက်ပြီး ပညာလေး ဘာလေး သင်ဖူးတော့ ပြုတ်မနူး ခူးမနပ်ဆိုသလို ဖင်ခေါင်းကျယ်တာပေါ့ကွာ။ ပညာတတ်ဆိုတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ငါနေလာတာကြာပြီ၊ မင်းလောက် မိုက်ရိုင်းတဲ့သတ္တဝါ ငါတစ်ခါမှ မကြုံဘူး၊ မကြားဘူးတာတော့ အမှန်ပဲ။ မင်းတတ်တဲ့ သညာတွေနဲ့တောင် မတန်ပါဘူးကွာ၊ မင်းလိုကောင် ပညာရှိဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ မှတ်ကွ။ မင့်ဖက်က ဝင်ဟောင်တဲ့ နစ်ကီရှိန် ဟိုတလောက ငါကန်ထားလို့ မေးရိုးနဲ့ နံရိုးပါ ကျိုးပြီးပြီ။ အခုနည်းနည်း သက်သာလို့ မင့်အားကိုးနဲ့ ထအူပြတာ။ အားတော့ အားနာပါတယ်ကွာ။
November 22, 2012 at 6:39am · Like
Ye Myint ညွန့် ရွှေ ခွေးသား။ မင်းကို စောက်စကားဆက် မပြောတော့ ။ မင်းကို တနေ့ နေ့ လူချင်းတွေ့ မယ်။ ဒါဘဲ ခွေးသား။
November 25, 2012 at 8:34pm · Edited · Like
Ye Myint FB ပေါ်မှာ ပြောတာ ပြောထားတာ လက်ကုန်ပြီ။ မင်းစောက်ပါးစပ် ကို ပိတ်ထားတော့ ခွေးသား။
November 25, 2012 at 8:18pm · Edited · Like
Tun Naing ဟားဟား ခွေးသားဆိုတော့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့...ဘာဆက်ပြောစရာအကြောင်းရှိတော့လည်း တော်ပြီပေါ့...
November 25, 2012 at 8:33pm · Like · 1
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:41 PM